🥇 Mmemme maka njem logistic
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 263
Video nke usoro ihe omume maka iga logistic
Dezie mmemme maka logistic njem
Ngwa a na-akwụ ụgwọ maka ngwa ngwa bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịnweta ihe bara uru n'ezie n'efu? Anyị ga-agba mbọ ịza ajụjụ a n’isiokwu a. Azịza ya dị nkenke bụ ee - ọ bụ eziokwu. Mana ajụjụ bụ, olee etu ụdị mmemme a si arụ ọrụ, ọ dịkwa mma ọ bụla? Otu mmepe sọftụwia nke USU Software na-enye azịza doro anya - naanị nsụgharị ngosi nke mmemme ọma nwere ike ịbụ n'efu. Versionsdị nsụgharị nke mmemme dị otú ahụ bụ ngwaahịa a na-akwụ ụgwọ mgbe niile na USU Software abụghị otu na nke ahụ.
Dị ngosi nke USU Software gụnyere ọrụ niile bụ isi nke azụmaahịa ọ bụla nwere ike ịchọ. Otú ọ dị, ụdị ngosi ahụ nwere oge ikpe dị oke oke ma ya adabaghị maka ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa njem. Ebumnuche nke nkesa bụ naanị maka ebumnuche ozi. Enwere ike ibudata ihe omume anyị n'efu ma ị nwere ike ịmara onwe gị na arụmọrụ ya n'ime izu abụọ zuru oke nke oge ikpe. Nwere ike ịchọta ụdị ngosi na weebụsaịtị anyị. Iji zụọ ụdị zuru ezu, kpọtụrụ ndị ọrụ nkwado teknụzụ site na iji ihe dị mkpa nwekwara ike ịchọta na weebụsaịtị. All ọmụma zuru ezu banyere ike nke ngwa ahụrụ n'ebe ahụ dị ka nke ọma.
Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya iji mmemme n'efu maka ngwa ngwa njem. Mmemme ndị dị ka nke a enweghị ike ijide n'aka na mmejuputa nke akpaaka maka ọrụ niile na-eguzo n'ihu ụlọ ọrụ chọrọ njikwa kacha mkpa ọ bụla ụgbọ njem na ụlọ ọrụ logistic chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụta ngwa sitere n'aka ndị mmepe nke USU Software, ị nwetara ohere magburu onwe ya iji soro ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ dum, yana maka ndị ọrụ ọ bụla n'otu n'otu. Ejiri mmemme a rụọ ọrụ maka nyochaa oge ọrụ ndị ọrụ. Edere ọrụ ọ bụla nke onye ọrụ ahụ dere. Nakwa oge ejiri ya na ogo ọrụ enyere.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme maka ngwa ngwa njem, ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ịnwa ibudata ya n'efu, mana azụmaahịa gị enweghị nnukwu mmefu ego, anyị nwere ike ịnye gị ngwọta anyị maka ịbugharị ngwa ngwa njem, maka ọnụ ala, mana yana nnukwu ọrụ dị iche iche bara uru. Dịka ọmụmaatụ, site na enyemaka nke USU Software, ị ga-enwe ike ịgbaso niile nnyefe na ezigbo oge. Ma arụmọrụ nke usoro ihe omume maka iga logistic management adịghị nnọọ akwụsị n'ebe ahụ.
Ebe nchekwa data bara uru nwere ozi zuru oke gbasara ngwa agha. Ga-enwe ike ịnweta ozi ọsọ ọsọ na nchekwa data nke mmemme ahụ ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ ozi gbasara nnata na onye zitere ngwugwu ahụ, njirimara nke ngwaahịa a, ogo ya, ịdị arọ ya, wdg. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịrịọ uru nke ibu, ọnọdụ nke nnyefe na maapụ ahụ, na ụbọchị nke eziga.
Usoro mmemme njikwa njem, nke enwere ike ibudata n'efu dịka ụdị ngosi, nwere ọtụtụ uru karịa ngwa n'efu kpamkpam. Ihe omume ị na-ebudata n'efu agaghị enwe ike ịnye ụdị mkpuchi ahụ gbasara ọrụ ndị USU Software nwere ike. Ọzọkwa, na usoro nke oke nke ọnụọgụ dị iche iche dịka ọnụahịa-ọnụahịa, ọbụlagodi n'etiti ngwa ndị anaghị akwụ ụgwọ, uru anyị ka pụtara. Ọgbọ ọhụụ nke usoro ntinye nke ngwa ngwa njem nke USU Software ga-adaba n'ụzọ zuru oke na nhazi nke ụlọ ọrụ ụgbọ njem na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ.
Free lọjistik ngwa ga-enwe ike soro multimodal Mbupu na arụmọrụ zuru ezu. Na USU Software ga-arụ ọrụ zuru oke nke nsuso ụzọ njem nke ụdị, ụdị nnyefe, ma nwee ike idozi ha site na iji njem. N'ihe banyere mmemme anyị, ọ baghị uru ụdị ụgbọ njem ụlọ ọrụ na-eji mgbe ebugharị ngwongwo. Ma ọ bụ ụgbọ njem, ụgbọ okporo ígwè, gwongworo, ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ụgbọ njem ọtụtụ - mmemme anyị ga-arụ ọrụ nke ọma ma dịkwa ọsọ ọsọ iji mezue ọrụ ya niile. Akụkụ ndị ọzọ nke usoro ihe omume ahụ nke ga-enyere aka na ngwa ngwa njem na ụlọ ọrụ ọ bụla gụnyere uru ndị dị ka ikike ịkọwapụta njem na nnyefe site na ụdị, dabere na nha nke ibu na ngwongwo ngwongwo na njem ahụ.
Ọ bụrụ na nzukọ a enweghị ọtụtụ ngalaba esenidụt, na oke nke ngwa ahịa ebuputara oke, ọ dị mkpa ịzụta ụdị maka obere ụlọ ọrụ, ebe enwere nhọrọ maka ụlọ ọrụ logistic nke nwere ngalaba na mba dị iche iche. Ihe omume bara uru maka ngwa ngwa ibugharị nke ị nwere ike ibudata n'efu naanị n'ụdị ụdị ngosi ga-arụ ọrụ maka obere oge.
Free lọjistik mmemme na-enye naanị obere oge eji eme ihe. Zụta akwụkwọ ikike nke ngwa ahụ maka ọnụahịa dị oke ọnụ, ị ga-enweta mmemme kachasị mma maka ijikwa ọrụ ọfịs na njem nke ngwongwo na ndị njem. The USU Software bụ vasatail na ọ na-adabara akpaaka nke ọ bụla lọjistik ụlọ ọrụ.
Mgbe izizi ịbara uru ahụ, ị ga-edebanye aha ma nye ya ikike na sistemụ ahụ. Mgbe ịbanye na onye ọrụ a na-enye gị nhọrọ nke ọtụtụ usoro atọrọ atọ, nke ga-enyere ha aka ịhazi ọrụ ha. Mgbe ịhọrọ atụmatụ na isiokwu nke onwe, onye ọrụ ahụ na-aga n'ihu na nhọrọ nke arụmọrụ na ntọala interface. A na-echekwa mgbanwe niile na akaụntụ nkeonwe yana n'oge ikike na-esote, ọ dịghị mkpa ịhazi ihe niile ọzọ ma emechaa. Maka onye ọrụ ọ bụla, e mepụtara akaụntụ nke aka ha, ya na ntọala nke ya.
Enweghi mmeghari mmemme di oke oru, ya mere o kariri ma baa uru karia i zuta ugwo ugwo, nke oma nke gha enyere gi aka mezue oru nile enyere gi. Na USU Software, a na-ahazi ọrụ niile n'usoro, a na-echekwa ozi ahụ na folda kwesịrị ekwesị, nke ọ dị mfe ịchọta ngọngọ nke ozi nke mmasị. Ihe omume n'efu maka lọjistik agaghị enwe ike inyere gị aka izipu ozi ịntanetị nke ndị ahọrọ ahọpụtara, mana mmemme anyị nwere ike ijikwa ọrụ a n'ụzọ dị mfe. O zuru ezu naanị ịme nhọrọ nke kọntaktị ezubere iche ma dekọọ ozi. Ngwa a ga - eme ihe ọzọ na akpaghị aka, nke ga - ebelata ọtụtụ mmefu.
Mmejuputa na ojiji nke ihe omume anyi na enye gi ohere iwelata onu ogugu ndi oru n’enye gi aka. Nwere ike ibudata ma malite iji mmemme lọjistik ugbu a, na-eyigharịghị njikarịcha nke ọrụ ọfịs. Site na ịkwụ obere ego iji zụta USU Software, ị na-echekwa nnukwu ego iji kwado ndị ọrụ na-emebiga ihe ókè.
Ihe omume anyị maka ngwa ngwa njem, nke ị nwere ike ibudata n'efu na weebụsaịtị USU Software na ụdị nke ngosi ngosi, nwere atụmatụ ngwaọrụ modulu, nke na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịrụ ọrụ na ya. Nwere ike ibudata ma jiri mmemme ahụ ọsọ ọsọ na enweghị nsogbu ọ bụla. Iji zụta otu akwụkwọ ikike nke ngwa ahụ, biko kpọtụrụ ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ anyị. Edere kọntaktị niile na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ ọrụ anyị.